Warar - Waa maxay farqiga u dhexeeya dhoobada iyo shiinaha lafaha?
koob & usaucer
Waa maxay farqiga u dhexeeya dhoobada iyo shiinaha lafaha?
1. Dayactirka dhoobada
1. Qalabka guriga lagu nadiifiyo ayaa loo isticmaali karaa nadiifinta maalinlaha ah.
2. Ku dar wax yar oo ammonia ah saabuun ama isticmaal isku darka qadar isku mid ah linseed iyo turpentine marka hore, kaas oo yeelan doona sun nadiif ah oo ka dhigi kara dusha sare dhalaalaya.
3. Haddii aad ku daadiso dareerayaasha dheeha badan ee adag sida shaaha ama khad adag lebenka, si dhakhso ah u masax.
4. Wax mar mar mar si aad uhesho si aad uhesho difaac waqti dheer soconaya, waqtiga udhaxeeyaana waa 2-3 bilood.
5. Haddii waxoogaa xoq ahi ay ka jiraan dusha lebenka, mari caday meesha aad xoqday kuna tirtiro maro jilicsan oo qalalan si aad u nadiifiso xoqitaanka.
2. Dayactirka shiinaha lafaha:
1. Waa in lagu nadiifiyo gacanta, oo aan lagu dhaqin mashiinka weelka lagu dhaqo. Haddii aadan runti rabin inaad gacanta ku maydho, waa inaad doorataa weel dhaqe oo ay ku shaqeeyso meyrar lagu dhaqo “porcealin iyo crystal”.
2. Weelasha miisaska leh geesaha dahabka waa in aan lagu ridin foornada microwave si looga fogaado in ay daxalato
3. Qiimaha dhaqidda PH waa inuu u dhexeeyaa 11-11.5.
4. Markaad ku maydhayso biyo nadiif ah, heerkulka biyuhu waa inuusan ka badnaan 80 ℃.
5. Ha ku shubin koobka kulul si toos ah biyo qabow, si aanad u dhaawicin balaastigga sababo la xiriira isbeddelka heerkulka degdegga ah.
6. Haddii ay jiraan xoqitaan, waxaad isticmaali kartaa daawada cadayga si aad u nadiifiso.
7. Haddii ay jiraan wasakhda shaaha, waxaa lagu nadiifin karaa liin dhanaan ama khal.
8. Waxaa fiican inaadan u isticmaalin kuleylka lama filaanka ah, si uusan u qarxin.
9. Si toos ah ha u isticmaalin olol furan
1. Qalabka ceyriinka kala duwan:
Weelku wuxuu ka samaysan yahay dhoobo dabiici ah iyo macdano dabiici ah oo kala duwan oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee cayriin, iyo boortalaaska leh budada lafaha ee ka badan 25% ee alaabta ceyriinka ahi waa shiinaha lafaha.
2. Nidaamyo kala duwan:
Lafaha shiinaha lafa-qaadashadu waxay qaadataa habka toogashada labaad, heerkulkuna wuxuu u dhexeeyaa 1200 digrii iyo 1300 darajo. Guud ahaan, dhoobada ayaa la samayn karaa ka dib markii lagu toogto 900 digrii.
3. Miisaanno kala duwan:
Awoodda sare ee shiinaha lafaheeda, faleenka ayaa aad uga khafiifsan tanjirta caadiga ah, sidaa darteed shiinaha lafaha ee isku mugga ah ayaa aad uga fudud khafiifka tan galaas.
4. Asal kala duwan:
Shiinaha lafta ayaa asal ahaan ka soo jeeda Boqortooyada Midowday waana faallooyin gaar ah oo loogu talagalay qoyska boqortooyada iyo dadka gobta ah ee Boqortooyada Ingiriiska. Dhoobada ayaa laga keenay Shiinaha oo leh taariikh dheer.
1. Aragti caafimaad leh
Farqiga u dhexeeya qalabka iyo farsamooyinka u dhexeeya lafaha shiinaha iyo dhoobada ayaa go'aaminaya farqiga u dhexeeya fasalkooda. Dhuxusha lafaha xayawaanku waa xulashada ugu weyn ee laga sameeyo shiinaha lafaha, waxa ku jiraana waa ilaa 40%. Waqtigan xaadirka ah, cuntada lafaha leh ee tayada sare leh ee qoyska boqortooyada Ingiriiska oo leh cunnada ugu badan ee lafaha adduunka ayaa dhan ilaa 50%.
2. Heerka geedi socodka
Dusha ubaxa shiinaha lafaha iyo dusha dhalaalaya waa la isku dhafan yahay, mana ku jiro macdanta "lead" iyo "cadmium" ee waxyeellada u leh jirka aadanaha. Waxaa loogu yeeri karaa dhab ahaan "galaas cagaaran". Isticmaalka muddada-dheer wuxuu faa'iido u leeyahay caafimaadka aadanaha. Lafaha shiinaha laba jeer ayaa la eryay, hawshana way adagtahay. Waxaa kaliya laga soo saaraa Ingiriiska, Shiinaha, Japan, Jarmalka, Ruushka, iyo Thailand. Shiinaha lafuhu waa fududahay, cufan yahay oo adag yahay (laba jibbaar maaddada maalin kasta la isticmaalo), ma fududa in la xidho oo la jebiyo, isweydaarsiga kulaylka ee ah 180 digrii Celsius iyo 20 digrii oo aan lahayn dildilaac, iyo heerka nuugista biyaha ayaa ka yar 0.003%.
3. Saamaynta kuleylka kuleylka
Marka loo barbardhigo tanjir dhaqameedka, shiinaha lafaha ayaa leh haynta kuleylka oo wanaagsan iyo dhadhan fiican marka la cabbo kafeega ama shaaha.
Lafta shiinaha way ka cimri dheer tahay dhoobada caadiga ah. Tani waa sababta oo ah halabuurka shiinaha lafuhu wuu ka duwan yahay faleebada caadiga ah. Waxay noqon kartaa mid khafiifa, ka sii adag oo ka sii xirmo badan oo u adkeysta, ma sahlana in la xidho oo la dillaaco. Adagga shiinaha lafihiisa waa inuu sidoo kale ka badnaadaa 2 jeer dhoobada. Lafaha Shiinaha ma dillaaci doono waqtiga kuleylka lagu beddelo inta u dhexeysa 180 between iyo 20 ℃ biyo. Si kastaba ha noqotee, waxaa ugu wanaagsan in aan si ula kac ah u soo noqnoqonin qaboojinta iyo kuleylka degdegga ah inta lagu jiro isticmaalka, sababo la xiriira ballaarinta kuleylka iyo foosha, alaabada dhoobada ayaa u nugul inay qarxaan.
5. Darajada badeecada
Marka loo barbardhigo dhoobada caadiga ah, shiinaha lafaha ayaa aad uga sarreeya. Muddo dheer, lafaha shiinaha wuxuu ahaa faasil gaar ah oo loogu talagalay boqortooyada Ingiriiska iyo dadka sharafta leh. Waqtigaan la joogo waa tan kaliya ee ugudambeysa sare ee laga aqoonsado adduunka. Waxay leedahay laba qiyam ?? isticmaalka iyo farshaxanka. Waxay astaan ​​u tahay awood iyo mansab waxaana loo yaqaanaa boqorka faalsada.
Intaas waxaa sii dheer, lafaha Shiinaha waa mid jilicsan oo hufan, qaabkiisuna waa qurux iyo xarrago, dusha midabkiisu waa sida qoyaanka oo kale sida Jaadka, dusha ubaxaana xitaa wuu ka midab badan yahay. Horumarka lafaha shiinaha la aqbalay oo ay adeegsadeen dad aad iyo aad u tiro badani. Mar dambe looguma talagalin ragga wax cunaya, weelasha maraq loo cuno, laakiin sidoo kale nooc mooddo iyo raaxo farshaxanimo ah, oo muujinaya ilbaxnimada cuntada, ayaa si tartiib tartiib ah u dhex gashay nolosheena maalinlaha ah.
Waqtiga boostada: Dec-10-2020
Kusoo Biir Wargeyskeena
903,9th Floor, Dhismaha A4, LiLang International Jewelry Industrial park, BuLan Rd, Nanwan Street, LongGang, ShenZhen China
Miiska miiska sheyga laftiisu miyuu aad u fudud yahay ...
Keebaa fiican, dhoobada cad ama tan cusub b ...
Waa maxay farqiga u dhexeeya dhoobada a ...